(2010) "ငါ Porn-related Erectile အလုပ်မဖြစ်ထံမှပြန်လည်ဘယ်လို" - Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်
UPDATE: ပိုပြီးထနေ့စွဲသတင်းအချက်အလက်အဘို့, ကြည့်ရှု Porn & ED အပိုင်းနှင့်အတူစတင် ဒီမှာ START: Porn-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်
ဒီဆောင်းပါးကိုထောက်ပံ့တဲ့လေ့လာမှုစာရင်းကိုလည်းကြည့်ပါ။ porn ကိုအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ် porn / လိင်စွဲလမ်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှနိမ့်ဦးနှောက်ကို Activation နှင့်အနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုအကြားလင့်များသတင်းပို့လေ့လာရေး
အမေရိကန်ရေတပ်ဆရာဝန်များအားဖြင့် peer-ပြန်လည်သုံးသပ်စက္ကူ - အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်စေသလဲ? လက်တွေ့အစီရင်ခံစာများ (2016) နဲ့တစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - ဒါဟာ porn-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများအပေါ်စာပေတစ်ခုကျယ်ပြန့်သုံးသပ်မှုပါပဲ။ အဆိုပါသုံးသပ်ချက်ကိုနုပျိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများအတွက်ကြီးမားတဲ့မြင့်တက်ထုတ်ဖော်နောက်ဆုံးပေါ် data တွေကိုပေးပါသည်။ အဆိုပါစက္ကူကိုလည်းညစ်ညမ်းစွဲများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်ဆိုင်ရာအာရုံကြောလေ့လာမှုများကို examine ။ အဆိုပါဆရာဝန်များက porn-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်ဖွံ့ဖြိုးသောလူတို့၏3လက်တွေ့အစီရင်ခံစာများသည်။
ဆောငျးပါး: တစ်ဦးက 28 နှစ်အရွယ်ကသူ့နာတာရှည် copulatory ခွန်အားမရှိခြင်းကုပေးတယ်။
"Porn တက်အမျှစွမ်းဆောင်ရည်ကျသွား?"ယောက်ျားတွေကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုသတင်းပို့တယ်၊ သူတို့နှစ်ဆယ်နှစ်ဆယ်လောက်တောင်မှပြန်ပြောပြတယ်။ တုံ့ပြန်မှုသည်အံ့အားသင့်စရာဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒီပစ္စည်းကိုအကြိမ်ထောင်ပေါင်းများစွာအကြိမ်ကြိမ်ဖတ်ပြီးပြီ။ မိုးသည်းထန်တဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာအသုံးပြုသူများဟာသူတို့ဟာ Erectile အာနိသင်ကိုဆုံးရှုံးနေရကြောင်းအတည်ပြုပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်“ အရင်တုန်းကမဟုတ်ဘူး” ဟုထင်ရသည်။ အခမဲ့ထုတ်လွှင့်သော hyper-stimulating ဗီဒီယိုများသည်မကြာသေးမီကအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ပြproblemနာဖြစ်နေသောဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ပြနာမှာကြည့်ရှုသူများ၏အလွန်ကောင်းမွန်သော penises တွင်မဟုတ်ဘဲသူတို့၏ ဦး နှောက်၏ဆုလာဘ်အစီအစဉ်တွင်ဖြစ်သည်။ ပုံမှန်သော dopamine sensitivity သည် circuit အတွင်းရှိပုံမှန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုအတွက်အလွန်အရေးကြီးသည် များစွာသောဦးနှောက်၏ dopamine တုံ့ပြန်မှုအားနည်းစေ။ ပုံမှန်ပြန်သွားဖို့, ဦးနှောက် reboot လုပ်ဖို့အချိန်လိုအပ်ပါတယ် အစွန်းရောက်ဆွခြင်းမရှိဘဲ.
ကံမကောင်းစွာဖြင့်၊ ညစ်ညမ်းသုံးစွဲသူများအနေဖြင့်ပြtheနာသည်အလွန်ပြင်းထန်သည်အထိအဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတို့သည်အလွန်ပြင်းထန်သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်အတူဖြစ်ပေါ်လာသည့်နှေးကွေးသည့်ပြsolveနာများကိုသဘာဝအလျောက်“ ဖြေရှင်း” သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဦး နှောက်၏သဘာဝအထိခိုက်မခံမှုနှင့်၎င်းတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုပိုမိုအားကောင်းလာခြင်း။ ဝေဒနာသည်အချို့သည်သဘာဝအားဖြင့်အန္တရာယ်များသည့်လိင်မှုကိစ္စတိုးမြှင့်ဆေးများကိုသာသုံးစွဲကြပြီး၎င်းတို့သည်မိမိတို့ကိုယ်ကိုအနာပျောက်စေသောပြmaskနာတစ်ခုသာဖုံးကွယ်ထားသည်ကိုမသိကြပါ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ erectile health သို့ပြန်သွားသောသူ၏လူနှင့်ပတ်သက်သောမှတ်ချက်များကိုဒီမှာကြည့်ပါ။
[အပတ်မျှ porn, တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေသို့မဟုတ်အော်ဂဇင်၏သုံး] နှစ်ပေါင်းများစွာငါ porn ကိုကြည့်ပြီးအထက်တန်းကျောင်းစကတည်းကအနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်တစ်ကြိမ်မှာ orgasm အမြောက်အများကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတတ်သည်။ တက္ကသိုလ်မှာငါဟာအားကစားတွေအများကြီးကစားခဲ့ပေမဲ့လည်းမျက်မှန်တပ်ပြီးကွန်ပျူတာလူမှုရေးဘ ၀ မရှိခဲ့ဘူး။ ငါအခန်းထဲမှာနေပြီးလေ့လာတယ်၊ ဂစ်တာတီးတယ်။ ဤအရာအလုံးစုံတို့ကိုငါတော်တော်လေးကောင်းတယ်။
ငါအိုင်တီအလုပ်တစ်ခုရတယ်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ပိုင်အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုကိုမတတ်နိုင်တော့ဘူးဆိုရင်ဂိတ်တံခါးတွေဖွင့်လိုက်တယ်။ အရည်အသွေးမြင့်မားသော porn ၂၄/၇ ကိုအကန့်အသတ်မရှိအသုံးပြုခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်နံနက် ၄ နာရီအထိနေပြီးမွန်းတည့်ချိန်တွင်ထသည်။ လအနည်းငယ်အကြာမှာငါအရမ်းအသည်းအသန်မူးယစ်ဆေးဝါးလွန်းလို့ကျွန်တော့်ရဲ့အင်တာနက်ခွဲတမ်းထက်ကျော်လွန်ပြီးဒေါ်လာ ၁၀၀၀ ပေးချေရတယ်။ တခါတလေ streaming video 24-7 ပြတင်းပေါက်တွေတခါတလေဖွင့်ထားတတ်တယ်။ ဤပုံစံသည်ကျွန်ုပ်၏အစောပိုင်းနှစ်ဆယ်ကျော်တစ်လျှောက်လုံးဆက်လက်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ကျွန်တော်လုံးဝမပျော်ဘူး၊ ဆရာဝန်ကကျွန်တော့်ကိုစိတ်ဓာတ်ကျတယ်ဆိုတာသိလိုက်ရတယ်။
porn သည်ကျွန်ုပ်၏ဆန္ဒကိုယာယီသိမ်းဆည်းလိုက်သောကြောင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားမျှတမှုရှိစေရန်ကောင်းသောအရာဟုထင်ခဲ့သည်။ ငါလမ်းပေါ်မှာပူပြင်းတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုကြည့်ပြီးညစ်ညမ်းမှုကကျွန်တော့်ကိုမထီမဲ့မြင်ပြုခဲ့တဲ့အတွက်အနည်းဆုံးနှိုးဆွပေးတဲ့အရိပ်အယောင်မတွေ့မိလို့ဂုဏ်ယူမိတယ်။ ဒါဟာအမျိုးသမီးတွေငါ့ကိုကျော်နိုင်တယ်လို့ယုံကြည်တဲ့အာဏာကိုပြန်ယူနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုပါ။ သိပ်မကြာခင်မှာပဲကျွန်တော်ဒီဟာကိုဘယ်လောက်ဖျက်ဆီးတယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်လာတယ်။
ကျောင်းမှာ၊ မီဒီယာနဲ့အင်တာနက်ပေါ်ကသင်ယူခဲ့တာတွေအများစုကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများတောင်မှကျန်းမာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ငါသိတဲ့ယောက်ျားတွေအားလုံးထဲကိုဒီဟာတွေဝင်ခဲ့ကြတာပါ၊ ဒါကြောင့်ငါဟာသဘာဝလိင်ဘဝနဲ့ဆန့်ကျင်နေတယ်ဆိုတာကပုံမှန်မဟုတ်တာကငါ့အတွက်ဘာမှဖြစ်မလာခဲ့ဘူး။ ငါသိသလောက်ကတော့တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်အကောင်းဘက်သို့မရောက်၊ ကျနော့်သူငယ်ချင်းတော်တော်များများကဒီအမြင်ရှိနေဆဲ။
နောက်ဆုံး ၂၃ နှစ်မှာအပျိုစင်ဘဝကိုဆုံးရှုံးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်မရဲ့ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ကဆိုးဝါးခဲ့တယ်။ ငါ Semi- ခက်ခဲ, အာရုံကြောကြီးနှင့်ဘာမျှမအလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ ငါလုံးဝမကြိုက်ဘူး၊ ငါ့ရည်းစားဟောင်းလည်းအဲဒီလိုပဲပြောမှာသေချာတယ်။ ငါသူမကိုချစ်ခဲ့ပေမဲ့ငါဟာငါ့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဘာလုပ်ရမှန်းမသိတဲ့ပုံစံလိုပဲလိင်ဆက်ဆံမှုကိုနောက်တစ်ခါထပ်မံတုံ့ပြန်ရန်ငါ့ ဦး နှောက်အာရုံကြောစနစ်ကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားခဲ့သည် ကျွန်မတို့ရဲ့လိင်ဘဝဟာနှစ်နှစ်အကြာမှာကျွန်မတို့ပြိုကွဲခဲ့ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုပါ။ ငါတချိန်လုံး porn အများကြီးစောင့်ကြည့်ခဲ့သည်။ အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်ပြီဆိုတာသဘောပေါက်လာပြီ၊ ဒါပေမယ့်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကသူ့ကိုအပြစ်တင်ခဲ့တယ်။ သူမမှာကိုယ်ပိုင်ပြproblemsနာတွေရှိခဲ့ပေမယ့်အပြစ်မတင်ခဲ့ပါဘူး။ ကျွန်တော့်ကာကွယ်ရေးအတွက်ကျွန်တော်ဟာပိုကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုကိုမသိခဲ့ဘူး။
အဲဒီအချိန်ကစပြီးငါလိင်ဆက်ဆံခဲ့ဖူးတယ်၊ အစဉ်မပြတ်ငါစိတ်လှုပ်ရှားနေပြီးစိုက်ထူခြင်းအတွက်ပြproblemsနာများမကြာခဏရှိသည်။ ကျွန်တော့်ရဲ့နောက်ဆုံးအော်ဂဇင်ဟာတရုတ်အနှိပ်ခံမိန်းကလေးတစ်ယောက်လက်ထဲရောက်နေတုန်းမှာတောင်အော်ဂဇင်စရိုက်ကိုကျွန်တော်အခက်တွေ့ခဲ့တယ်။ သူမသည်လှပပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိသောခန္ဓာကိုယ်ရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်သည်အော်ဂဇင်ပြုရန်အချိန်များစွာယူခဲ့ပြီးသူမအရှုံးပေးခဲ့သည်။ ဤသည်မှာကျွန်ုပ်သည်ပုံမှန်နည်းလမ်းများဖြင့်နှိုးဆွရန်ကျွန်ုပ်၏စွမ်းရည်ကိုရေတို - ဖြတ်လိုက်ခြင်း၏ဥပမာတစ်ခုမျှသာဖြစ်သည်။
ပူပြင်းတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကကျွန်တော့်ရှေ့မှာခြေထောက်တွေပြန့်နေပြီးခြေထောက်တွေပြန့်နေတယ်။ ဒါကငါ့ကိုတကယ်ကြောက်တယ် ငါ့ရင်သွေးကိုပြန်ချင်တယ် ငါနောက်တဖန်ပုံမှန်ခံစားချင်တယ်။ ကျန်တဲ့ကမ္ဘာနဲ့ဆက်နွှယ်ပြီးကျွန်တော့်ဘဝကိုပျော်မွေ့ချင်တယ်။ ငါကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုလှောင်ပြောင်ဖို့ကြိုးစားနေတာ၊ ပြီးတော့ငါ့အတိတ်ကစိတ်ဓာတ်ကျစေတဲ့နေရာမှာအဲဒါကအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကကျွန်ုပ်သည်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကိုစွန့်လွှတ်ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့ပြီးတိုးတက်မှုများကိုသတိပြုမိခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်အဲဒီအချိန်အတောအတွင်းမှာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်စာဖတ်ခြင်းစသည်တို့ပဲ။ ဒီကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုဟာပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်အနေနဲ့အော်ဂဇင်မပါဘဲအပြင်အပြင်လှုံ့ဆော်မှုတွေမပါဘဲလုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တာဖြစ်တယ်၊ ဒါကသော့ချက်ဖြစ်တယ်လို့ငါခံစားရတယ်။ စုစုပေါင်း abstinence သည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုမြန်ဆန်စေမည်ဟုထင်ရသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၂၈ နှစ်ရှိပြီးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာသန်စွမ်းနေပြီးကျွန်ုပ်၏အစားအစာသည်သန့်ရှင်းပါသည်။ ငါပုံမှန်ထွက်အလုပ်လုပ်ပါတယ် ငါဆေးလိပ်မသောက်ဘူး ငါသော်လည်းတနင်္ဂနွေပိုလျှံဖို့သောက်ကြဘူး။
ထူးဆန်းတာကငါဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတာနဲ့ရပ်တန့်ဖို့မလွယ်ဘူးဆိုတာပဲ။ ခေါင်းကိုက်ခြင်းနှင့်မငြိမ်သက်မှုအိပ်ပျော်ခြင်းအပြင်အပြင်ကျွန်ုပ်တွင်လည်းမရှိခဲ့ပါ ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေ များစွာသောလူဖော်ပြသည်။ အဲဒီအစားငါဘာမှမခံစားရ။ ကျွန်မမှာလိင်စိတ်နည်းနေသလိုပဲ။ နံနက်သစ်သားမရှိပါ။ စိုစွတ်သောအိပ်မက်မရှိ။ အဘယ်သူမျှမအလိုအလျောက်စိုက်ထူ။ အဘယ်သူမျှမမတရားသော။ ချိုချိုသာမရှိပါ ငါ၌လိင်ဆက်ဆံရန်အခွင့်အရေးရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ခန္ဓာသည်တုံ့ပြန်ခြင်းမရှိပါ။ ငါ tango အတန်းတွေတက်နေတယ်၊ ​​ဒါကြောင့်ကျိုးကြောင်းညီညွတ်တဲ့လူမှုရေးပေါ့။ ဒါပေမယ့်ငါက libido လက္ခဏာမပြသေးဘူး။ ငါလှလှပပမိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်အတူကခုန်နိုင်ပြီးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုလုံးဝမရှိပါ။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဟာဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်လို့ ဦး နှောက်ကသိတယ်၊
ကျွန်တော့်ကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းနှင့်ဆက်နွှယ်နေသည့်အရာမှာကျွန်ုပ်၏ ဦး နှောက်ကိုပြန်ဖွင့်ပြီးပုံမှန်ပြန်ဖြစ်နိုင်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်၏ယုံကြည်ချက်ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်စိတ်ပျက်စရာကောင်းပါတယ်
[ခြောက်ပတ်ကနောက်ပိုင်းမှာ] ယခုအပတ်သည်ကျွန်ုပ်၏ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်၌အလှည့်အပြောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ငါမသွားမီ, ငါ tango ကခုန်ကနေမိန်းကလေးဖော်ပြရန်လိုအပ်သည်။ သူမသည်အရပ်ရှည်ရှည်၊ မျက်လုံးအစိမ်း (ကျွန်ုပ်မျက်လုံးအစိမ်းရောင်)၊ ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြီးငရဲကဲ့သို့အေးမြသည်။ သူကလမ်းပေါ်ကအဆင်ပြေပြီးမြေကြီးပေါ်ကိုသွားပြီးအရာတွေအားလုံးနဲ့စကားပြောနိုင်တယ်။ သူမသည်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သာနေလိုသည်၊ ကျွန်ုပ်သည်ယခုအချိန်တွင်လိုအပ်သည့်အရာဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်၏ libido ပြန်လာပြီဟုပြောခြင်းသည်လုံခြုံသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါသည် မညစ်ညမ်း, တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေသို့မဟုတ် erotica ရှစ်ပတ်ကြာခဲ့သည်နှင့်အနည်းငယ်မျှသာစိတ်ကူးယဉ်။ ကျွန်ုပ်၏ရည်မှန်းချက်မှာကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ခန္ဓာသည်ပုံမှန်တုံ့ပြန်မှုစတင်နေပြီဟူသောအရိပ်အယောင်အဖြစ်၎င်းသည်စိုစွတ်သောအိပ်မက်တစ်ခုသို့ရောက်ရှိရန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်အဲဒါကိုတစ်ခါမှမလုပ်ခဲ့ပါဘူး ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကကျွန်ုပ်သည်ထိုင်းအနှိပ်မိန်းကလေးနှင့်အတူအပြင်ပန်းလှပသောအော်ဂဇင်ကိုခံစားခဲ့ရသည်။ ကျွန်တော့်ရဲ့တစိတ်တပိုင်းကအချိန်ဘယ်လောက်ကြာမယ်ဆိုတာသိချင်စိတ်နဲ့ကျွန်တော်စောင့်ချင်ခဲ့တယ်။ သို့သော်ထို့နောက်ကျွန်ုပ်၏ရည်မှန်းချက်မှာစိုစွတ်သောအိပ်မက်များမဟုတ်ဘဲပြန်လည်ကျန်းမာသည့်ဘဝကိုရရှိရန်ဖြစ်သည်။
ထိုအဖြစ်အပျက် မှလွဲ၍ အခြားတစ်ချက်မှာမူ၎င်းသည်ဖြောင့်မတ်စွာရှောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ [ငါနောက်ဆုံးတော့တန်ဂိုအတန်းတွင်ငါတွေ့ခဲ့သည့်မိန်းကလေးနှင့်လိင်ဆက်ဆံသောအခါ, erectile dysfunction (ED) မရှိပါ။ သူမကျွန်တော့်ကိုအောက်ထပ်ကိုမထိတွေ့မိခင်မှာခက်ခဲခဲ့ပါတယ် ကျွန်မတို့ကလိင်ဆက်ဆံတာအကြိမ်ကြိမ်ရှိတယ်၊ ဒါကြောင့်ဒုတိယနှင့်တတိယအကြိမ်တွင်“ အကူအညီ” အနည်းငယ်လိုအပ်ခဲ့သည်၊ သို့သော် ED ဟူ၍ မရှိခဲ့ပါ။ စတုတ္ထအကြိမ်ကတော့ကျွန်တော်တို့နာရီအနည်းငယ်စောင့်ဆိုင်းခဲ့ရပြီးကျွန်တော်ဟာဖွင့်လှစ်လိုက်ရုံနဲ့အကူအညီမပါဘဲနဲ့ခက်ခဲခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်အခုငါတရားဝင်, အကူအညီမပါဘဲစိုက်ထူလာပြီပြောပြောအန္တရာယ်ကင်းထင်ပါတယ်။
ငါလည်းသဘောပေါက်သည်မှာလိင်သည်စွမ်းဆောင်ရည်မဟုတ်ကြောင်း၊ ၎င်းသည်လူနှစ် ဦး ကိုဆက်သွယ်ပြီးပျော်စရာအကြောင်းဖြစ်သည်။ ငါကြည့်ရှုခြင်းမှငါစုပ်ယူသောအပေါငျးတို့သလိင်ဆက်ဆံမှုလုံးဝအကြောင်းကိုအကြောင်းမရှိသောအရာအားလုံး, နားမလည်ဖို့အတော်လေးခဏယူတော့မယ်ထင်ပါတယ်။ ယခုငါအာရုံစူးစိုက်ရန်အဘယ်အရာကိုငါသိ၏ ငါတကယ်နူးညံ့ပြီးကာမဂုဏ်ချုပ်တည်းမှုဖြစ်စေရန်၊ ကြိုးစားအားထုတ်မှုများစွာပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်ငါကအချိန်ကိစ္စပဲစစ်မှန်သောအမျိုးသမီးများနှင့်စစ်မှန်သောလိင်ဆက်ဆံဖို့ပဲထင်တယ်
အခုအချိန်မှာငါနားလည်လာပြီလို့ထင်တယ်။ ခဏတာမစားရင်သင့် ဦး နှောက်က dopamine ကိုထုတ်လွှတ်လိုက်တယ်။ ၎င်းသည်သင့်အားအစားအစာရှာရန်တိုက်တွန်းရန်ရှင်သန်မှုဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်သည်အစာမစားတော့ပါ။ သင်ပြည့်နေသည့်အခါသင့် ဦး နှောက်ကယင်းကိုပိတ်ပြီးသင်ဟာအစားအစာကိုမတောင့်တတော့ပါ။ အကယ်၍ သင်သည်ဤစက်ယန္တရားကိုအစာစားခြင်းဖြင့်အမြဲတမ်းအလွဲသုံးစားလုပ်ပါကသင်၏ ဦး နှောက်သည် dopamine နှင့်ဆက်စပ်သောအစပျိုးမှုများကို ၄ င်း၏ sensitivity ကိုလျော့နည်းစေသည်။ ထိုအရာသည်သင့်အားတူညီသောခံစားချက်ရရှိရန် ပို၍ အငွေ့ပျံစေရန်အမှန်တကယ်အားပေးသည်။ porn တူညီသောလမ်းအတွက်အလုပ်လုပ်တယ်။ အစားအစာနှင့်လိင်ကမဆိုးပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်သင်မူးနေရင်မင်း ဦး နှောက်ရဲ့သဘာဝ dopamine ပမာဏနှင့် receptor count ကိုစိတ်ပျက်သွားမှာပါ။ ယခုငါ porn ကို "ဦး နှောက်အတွက်အမှိုက်ပုံးထဲအစားအစာ" အဖြစ်စဉ်းစားပါ။ ညစ်ညမ်းသောအစားအစာများသည် ဦး နှောက်နှင့်သက်ဆိုင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိသည်။
သင်သည်အဘယ်မျှကာလပတ်လုံး (နှစ်ဦးစလုံးနာရီနေ့, နှစ်) porn / တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေကိုစောင့်ကြည့်ခဲ့ကြသည်။
ဘယ်လိုသီးသန့်သင့်ရဲ့ညစ်ညမ်း / အခြားအလှုပ်ရှားမှုများ (အစစ်အမှန်မိတ်ဖက်တွေနဲ့ဥပမာလိင်) ကိုနှိုင်းယှဉ်ခဲ့သည် masturbating ။
မည်မျှသင့်ရဲ့ညစ်ညမ်းကြည့်ပိုပြီးအမာခံများနှင့် gonzo အကြောင်းအရာ၏စည်းကမ်းချက်များ၌မြင့်တက်ခဲ့သည်။
အော်ဂဇင် (ဥပမာကစားစရာ, Auto-ခေါ်ဆောင်သွားအသက်ရှူကျပ်တူသောအလေ့အကျင့်, etc) ၏ခံစားချက်မြှင့်တင်ရန်အခြားအကူအညီအထောက်အပံ့များကိုအသုံးပြုခြင်း။
dopamine အဆင့်ဆင့် (လေ့ကျင့်ခန်း, အစားအစာ, ဖြည့်စွက်, စိတ်ကျရောဂါ, မူးယစ်ဆေးဝါးစတာတွေ) ကိုထိခိုက်သောအခြားအချက်များ။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုသင်၏စိတ်တွင်မည်မျှ“ ရှက်စရာကောင်းသည်” (ပိုရှက်စရာကောင်းသည်၊ ပိုပြtheနာကိုပိုဆိုးစေသည့် dopamine ထုတ်လွှတ်သည်) ကိုသင်မည်မျှ“ ရှက်စရာရှိသည်” ဟုယူဆသည်။
ကျွန်ုပ်၏အတွေ့အကြုံအပေါ် မူတည်၍ အောက်ဖော်ပြပါများသည်ထိရောက်မှုအလိုက်ပြန်လည်ထူထောင်ရန်နည်းလမ်းများဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။
အဘယ်သူမျှမညစ်ညမ်းမရှိတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ, (တနာတစ်ဦးနှင့်အတူဥပမာ) အခြားနည်းလမ်းဖြင့်အော်ဂဇင်
အဘယ်သူမျှမ porn, အော်ဂဇင်မှတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ။
porn မရှိတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေမရှိ, အော်ဂဇင်ကိုချွတ် Tapering ။
porn, တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမအော်ဂဇင်ကိုချွတ် Tapering
porn မရှိတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအခြားနည်းလမ်းများ (ကလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ဥပမာ) ကအော်ဂဇင်ကိုချွတ် Tapering
porn, အော်ဂဇင်မှတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေချွတ် Tapering ။
ငါပျမ်းမျှအားပြန်လည်နာလန်ထူအချိန်၏စည်းကမ်းချက်များ၌ပထမဦးဆုံးနှင့်နောက်ဆုံးနည်းလမ်းများအကြားခြားနားချက် 2-3 နှစ်ပေါင်းနှိုင်းယှဉ် 2-3 လအတွင်းဖြစ်နိုင်ကြောင်းစိတ်ကူးလိမ့်မယ်။
ဖြစ်နိုင်သည်မှာအချို့ယောက်ျားများအတွက်မိတ်ဖက်ဖြစ်စေ၊ အတိအကျပြောရလျှင်ပြproblemနာသည်ညစ်ညမ်းမဟုတ်ပါ; ယင်း ပြင်းထန်သောဆွ ကြောင်း dopamine dysregulation ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ နောက်ထပ် ED ဝေဒနာသည် wrote:
ငါပြchatနာပိုကြီးတဲ့ပြchatနာကိုဗီဒီယိုစကားပြော။ ငါထင်သည် dopamine“ hit” သည်အခြားအဆုံးတွင်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်သောမိတ်ဖက်နှင့်အထူးသဖြင့်ပိုမိုအားကောင်းသည်ဟုသူထင်သည်၊ နောက်ဆုံးတော့ငါနဲ့တကယ့်မိတ်ဖက်တစ်ယောက်လိုကင်မရာမှာပြသနာတွေထပ်တူဖြစ်လာတယ်။
ယခုပြproblemsနာများကိုသတင်းပေးနေသောလူငယ်များစွာသည်လူအများရှေ့တွင်ကေဘယ်လ်အင်တာနက်ကိုရရှိကြသည်။ သို့သော်အသက်အရွယ်မရွေးသုံးစွဲသူများသည်အန္တရာယ်ရှိပါသည်။ ညစ်ညမ်းမှုအလုံအလောက်ရှိစေမယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာအမြဲတမ်းစိုက်ထူပြီးလုပ်နိုင်တယ်လို့ဆိုတယ်။ “ Edging” သည်ဖွင့်ထားသောပြတင်းပေါက်ရှစ်ခုမှဆယ်ခုကြည့်ရှုခြင်းကဲ့သို့ပြင်းထန်သောလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘိုးဘေးဘီဘင်များအစဉ်အမြဲရင်ဆိုင်ခဲ့သမျှအရာများထက်များစွာသာလွန်သည်။
အောက်မှာ-အစီရင်ခံတင်ပြလျှင်မည်သည့်အမှု၌, ဖြစ်ရပ်ဆန်းအလွန်အစစ်အမှန်ဖြစ်ပါတယ်။ တယောက်သောသူထောက်ပြ:
နောက်တစ်ညမှာပြည့်တန်ဆာအကြောင်းအစီအစဉ်ကိုငါကြည့်နေတယ်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်များမှမိန်းကလေးအချို့ကိုကျွန်တော်အသိအမှတ်ပြုသည်။ တစ်ချိန်တုန်းကသူတို့ကနာတာရှည်ညစ်ညမ်းတဲ့တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေသူဘယ်သူလဲဆိုတာသူတို့ပြောနိုင်တယ်လို့ပြောတယ်၊ စဉ်းစားကြည့်ပါ၊ ယောက်ျားလိင်စိတ်ကူးစိတ်သန်းကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်ကျွမ်းကျင်စွာလေ့ကျင့်ထားသောမိန်းကလေးများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုလှုံ့ဆော်မှုနှင့်မကိုက်ညီပါ၊ အမှန်တကယ်တွင်အပြာစာပေရုပ်ပုံများကြည့်ရှုနေသောမိန်းကလေးများလည်းပါဝင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ချစ်ခင်မှုကိုသာလိုချင်သော“ သာမန်” အမျိုးသမီးများသည်အခွင့်အရေးမရကြပါ။
ဒါ့အပြင်အလုပ်မှာဒီဖြစ်စဉ်အတွက်ဖြစ်ပါတယ် မကြာခဏတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေဖို့အရေးကွီးကွောငျးကိုဒဏ္ဍာရီ မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးအဘို့။ အမျိုးသားများကသူတို့၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုထိန်းချုပ်မှုမရှိကြောင်းနှင့်မလိုလားအပ်သောရောဂါလက္ခဏာများဖြစ်ပေါ်စေကြောင်းမကြာခဏသတိပြုမိကြသော်လည်း၎င်းတို့သည်၎င်းတို့အားလမ်းလွဲစေခဲ့သည် ရ အလွန်မကြာခဏ ejaculate ။ သူတို့ရဲ့သာရှေးခယျြမှုဆွပြင်းထန်မှုတိုးမြှင့်ဖို့ဖြစ်ဟန်ရှိသည်။
တကယ်တော့တစ်ဦးရှည်လျားပြီးအစပိုင်းတွင်မသက်မသာ, အချိန်ထွက်သူတို့ကယ့်ကိုပုံမှန်ဦးနှောက် sensitivity ကိုဤသို့ပုံမှန် function ကို restore လုပ်ဖို့လိုအပ်သမျှဖြစ်နိုင်သည်။
Erectile ကျန်းမာရေးကိုပိုမိုနားလည်ရန် Gary's ကိုလေ့လာပါ Erectile အလုပ်မဖြစ်နှင့် Porn ဆလိုက်ရှိုး
ကျွန်မခင်ပွန်းနဲ့ကျွန်မ 10 နှစ်ပေါင်းလက်ထပ်ခဲ့ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လိင်ဘဝကိုအကြီးအထွက်တော့တာပဲ။ ကျွန်တော်တို့သည်နေ့စဉ်နေ့တိုင်း3ကြိမ်တစ်နေ့လျှင်လိင်ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူကတစ်ဦး 19yr ဟောင်းသကဲ့သို့ငါ၏ကမ္ဘာကြီးလှု! (သူ 25 ခဲ့သည်။ )
သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ထပ်ထိမ်းမြားသို့လစုံတွဲတစ်တွဲငါသည်သူ၏ porn စွဲ (သူ 10 ခဲ့ကတည်းက), နှင့်အင်တာနက်အပေါ် cable ကို TV နဲ့ porn စောင့်ကြည့်ဖို့ကသူ့လိုအပ်ချက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အထဲကတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏လိင်ဘဝသည်တဖြည်းဖြည်းယိုယွင်းလာသည်။ သူဟာခက်ခဲတဲ့စိုက်ခင်းတစ်ဝက်လောက်ပဲရခဲ့တယ်။ ငါသူ့ကိုသူပေးထားတာကိုကျွန်တော်လုံးဝမကျေနပ်မိသောကြောင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုပယ်ရှားရန်တောင်းဆိုခဲ့သည် (ကျွန်ုပ်အားသူအားလုံးလုယူထားသည်ဟုခံစားရသည်) ။ သူဟာလအနည်းငယ်ကြာအနားယူခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကျွန်မတို့ရဲ့လိင်မှုဘ ၀ ဟာနောက်တစ်ခါထပ်ဖြစ်လာမှာပါ။
၁၀ နှစ်ကျော်လုံးလုံးသူသည်ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်နှင့်အတူရိုးသားခဲ့သည်။ သူကနှစ်လကြာအောင်ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်တယ်၊ တခါတလေမှာ ၃ လတောင်မှ။ ဒါပေမယ့်သူကနောက်တစ်ခါပြန်ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် (wacking) ဘယ်တော့မှမပြောနိုင်ဘူး၊ သူကကျွန်တော့်ကိုတောင်မပြောဘဲတောင်မှသူဟာအားနည်းနေတာ၊ တစ်ခါတစ်ရံမှာသုတ်ရည်ထွက်တာတောင်မှမပြောနိုင်ဘူး။
ဒါကြောင့်ငါတို့ကသူ့ကိုလှုံ့ဆော်ဖို့ porn ကိုအတူတကွကြည့်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါကအထောက်အကူဖြစ်လိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်ငါနင့်ကိုစတင်ထပြီးသူကျွန်တော့်အတွင်းထဲကိုကြိုတင်ရင့်ကျက်မှုရောက်အောင်လုပ်မယ်လို့စဉ်းစားမိတယ်။
porn သည်ယောက်ျားနှင့်ပြaနာတစ်ခုမျှသာမဟုတ်ပါ ငါတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်အခါကျွန်ုပ်သည်သဘာဝစီးဆင်းနေသောအရည်အားလုံးဆုံးရှုံးသွားသည်။ သူသည်၎င်းအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်သောအခါငါမဟုတ်ပါ။ သူက LUBE ကိုရူးသွပ်နေသလိုလိုငါ Lube ကိုဆက်လျှောက်ဖို့ဆက်လုပ်နေရတယ်။ သူကငါနဲ့စိတ်ပျက်လာတယ် ပြင်ပမှချောဆီများရှိသည့်တိုင်လိင်သည်မသက်မသာဖြစ်လာသည် -“ ငါကခြောက်သွေ့ခြင်းနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းထက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်ချင်သည်။
ငါသည်သူ၏လိင်တံဖြစ်နိုင်ပုံကိုသိပြီးသူသည်ကျွန်ုပ်မည်မျှသဘာဝဖြစ်မည်ကိုသိသည်။ သူသည်ကျွန်ုပ်တို့သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုစွန့်ခွာ။ ၊ ဒါကြောင့်ငါတို့ကပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး porn ကအန္နတ်ကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်စားတာဘယ်လိုအစစ်အမှန်ဘ ၀ မှာတကယ်တော့အဲဒီလိုမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသူ့အားပြောပြသည်။ (သူကရယ်စရာလို့ထင်ခဲ့တယ်။ )
ကျွန်မတို့နှစ် ဦး စလုံးအအေးကြက်ဆင်ကိုသွားပြီးတစ်ကိုယ်ရည်ရာဂစိတ်ဖြေမည့်အစားကျွန်ုပ်တို့၏လိင်ဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်တစ် ဦး ကိုတစ် ဦး လာကြရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့တစ်ယောက်မှတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာတစ်လကျော်ရှိပြီ။ သစ်သီးဖျော်ရည်များသည်ငါတို့နှင့်တစ်ဖန် ပြန်၍ စီးလာသည်။ သူသည်အသက် ၁၉ နှစ်အရွယ်တွင်လိင်မှုကိစ္စကိုပြန်လည်ကျင့်သုံးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လိင်ဆက်ဆံမှုကို ၂ ကြိမ်ပြုလုပ်ပြီးတခါတရံ ၃ ကြိမ်တခါတရံတွင်၎င်းနှင့်တစ် ဦး ကိုတစ် ဦး ချစ်မြတ်နိုးသည်။
သင်၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒမှာသင်၏မျက်လုံးများကိုဖြည့်ဆည်းပေးသောအရာဖြစ်သည်။ ငါတို့နှစ် ဦး စလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏မျက်စိကိုတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး သာဖြည့်စွက်သည့်အခါ (ရွေ့လျားမှုအနည်းငယ်၊ တွန့်ခြင်းအနည်းငယ်၊ အရေပြားခွံတိုင်း) သည်ကျွန်ုပ်တို့၏လိင်စိတ်ကိုအလိုရှိကြသည်။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်လေ့လာခြင်းအားဖြင့်ဖွင့်တဲ့လမ်းဖြစ်လာတယ်၊ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အ ၀ တ်အစားတွေမချွတ်မချွတ်နိုင်အောင်စောင့်နေကြတယ်။
ငါဒီဆောင်းပါးကိုဖတ်နေတယ်လို့သူ့ကိုပြောတယ်၊ သူက“ Erectile Dysfunction? မင်းငါ့ကိုငါ့ကိုမထင်မှတ်တာပဲ!” ထိုအခါမူကားငါသည်ငါ့သီအိုရီကိုမှန်ကန်တလျှောက်လုံးမှန်ကြောင်းသူ့ကိုသို့ပြောသည်သူသဘောတူခဲ့သည်။ သူ့ **** ဟာခက်ခက်ခဲခဲကြိုးစားခဲ့ရရင်သူကအားနည်းနေတာ၊ ညစ်ညမ်းတဲ့အတွက်ကြောင့်၊ ငါတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာကငါခြောက်သွေ့နေလို့ဆိုတာကိုသူအမြဲသိတယ်။
ကြွင်းသောအရာ willpower ဖြစ်ပါတယ်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်သင်ယူရန်လိုအပ်ပါတယ်တစ်ခုခု။
Anonymous မှ““ Porn နဲ့ပတ်သက်တဲ့ Erectile Dysfunction ကနေဘယ်လိုပြန်ကောင်းလာသလဲ”” ဟုမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။
အကြောင်းအရာ - တကယ့်ပြissueနာ…။ ငါတို့မျှော်လင့်ထားတာထက်ပိုပြီးပျံ့နှံ့နိုင်တယ်
ဤဆောင်းပါးနှင့်သင်၏တုန့်ပြန်မှုသည်ကျွန်ုပ်ဘဝကိုတကယ်ကောင်းချီးတစ်ခုအဖြစ်အမှန်တကယ်ရောက်ရှိလာသည်။ ကျွန်ုပ်သည် ၂၇ နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးဤဆောင်းပါး၏ဇာတ်ကြောင်းသည်ကျွန်ုပ်ဘဝ၏ ၉၉% တိကျသောရောင်ပြန်ဟပ်မှုဖြစ်ကြောင်းရိုးရိုးသားသားဝန်ခံနိုင်သည်။ Meander ပြောသည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့သည်“ ညစ်ညမ်းသော / တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများကိုစွဲစွဲလမ်းလမ်းစွဲသူများ” သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အားနည်းချက်ကိုကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်ရန်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အကြောင်းပြချက်စာရင်းကိုကုန်ဆုံးစေခဲ့ပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်ဆံရေးကိုထိခိုက်စေသည်။ တစိတ်တပိုင်းသည်ဤစိတ်၏ပင်ကိုအတ္တကာကွယ်ရေးယန္တရား၏ရလဒ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်ဗဟုသုတမရှိခြင်းသည်အဓိကပံ့ပိုးသူဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြproblemsနာများဖြစ်ပေါ်စေသောအရာနှင့်၎င်းကိုမည်သို့ကုသနိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မသိရုံသက်သက်သာသာဖြစ်သည်။ လူ့အဖွဲ့အစည်းကကျွန်ုပ်တို့အားယုံကြည်မှုရှိခြင်းသည်အလွန်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းပြီးယောက်ျားများကအလွန်အမင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ခြင်းကိုလက်ခံသည်ဟုယုံကြည်သည်။ အဲဖရက် Kinsey၊ မာစတာနှင့်ဂျွန်ဆင်တို့ကဲ့သို့သောလိင်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများသည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းဆိုင်ရာအယူအဆကိုအားဖြည့်ပေးသည့်အခါမည်သည့်အရာမျှထိခိုက်မှုမရှိစေဘဲလုံးဝပုံမှန်ဖြစ်သည်။
ငါစိတ်ရှည်, နားလည်မှုနှင့်ထောက်ခံကြောင်းဘဝမှာရည်းစားတွေ့ပြီဖို့အခုအချိန်မှာအလွန်ကံကောင်းဖြစ်၏။ ယခုကြှနျုပျတို့နှစ်နှစ်အတူတကွဖြစ်ရပြီ, နှင့်လိင်ဘဝစို့ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့အတိတ်တစ်နှစ်လိင်မပါဘဲဝင်ကြပြီ။
ကြှနျုပျတို့၏ဆကျဆံရေး၏ပထမဦးဆုံး6လအတွင်းကျနော်တို့ငါ၏အလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်အကြောင်းကိုငြင်းခုံ၏ပဒေသာအတွက်စေ့စပ်; ကျွန်မသူမဤပြဿနာနှင့်အတူရှိခဲ့ပထမဦးဆုံးရည်းစားဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ် unspoken အိမ်မထောင်ဘဲနေခြင်းခဲ့ပေမယ့်, ငါကတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးဟာခိုင်ခံ့စေ၏ခဲ့သည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ ငါသည်ဤဆောင်းပါးနှင့် ပတ်သက်. သူမ၏နှငျ့ဆကျသှယျမျှဝေပေးနိုင်ဖြစ်၏။ ယခုကြှနျုပျတို့ဤပြဿနာများ၏ရောဂါဗေဒအချို့ကိုနားလည်မှုရှိသည်။ ကျနော်တို့က 8 တပတ်သင်တန်းအပေါ်အတူတကွအလုပ်လုပ်သွားဖို့ရှိပါတယ်။
အလားတူအတွေ့အကြုံများသောသူမည်သည်, သင်တစ်ဦးတည်းမဟုတ်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆယ်ကျော်သက်နှစ်များတွင်မြန်နှုန်းမြင့်ကျယ်ပြန့်တီးဝိုင်းအင်တာနက်ကိုတွေ့ကြုံခံစားရန်, ကံဖြစ်ဖို့မျိုးဆက်ဖြစ်ကြောင်း, သေးတစ်ချိန်တည်းမှာကျိန်ဆဲ၏။ ငါကပိုသုတေသနအစီရင်ခံပြဿနာအောက်မှာဒီအပေါ်ပြုမိပါလိမ့်မည်ကြောင်းနီးပါးအချို့ဖြစ်၏။